အဆောင် ဘုရားခန်း - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ရေးသားသူ နီစံ (အနီ) on နိုဝင်ဘာ 14, 2011 at 6:37am in ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိူးသမီးများအဖွဲ့
၃ နှင့် ၄ သုဘဒ္ဒာလို မိန်းကလေး(ဖြူးဆရာတော်)ဒေါင်းရန်
ချစ်စွဲ မုန်းစွဲ ကင်းပါစေ-အရှင်ဆန္ဒာဓိက ဘလော့အမျိုးအစားခွဲရန်(ဥပမာ.စာပေ.ဗုဒ္ဓ၀င်.....)
Like မျှဝေရန်..မိတ်ဆွေထံသို့ Tweet
Permalink Moe သည် နိုဝင်ဘာ 16, 2011 12:10pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါအနီရေ အမ ဒေါင်းလော့ဆွဲလို့မရလို့
Permalink နီစံ (အနီ) သည် နိုဝင်ဘာ 16, 2011 11:38pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ အမ ဘယ်တခုကို ဒေါင်းလို့မ၇တာလဲ လိုင်းမကောင်းလို့လား ဒါမှ မဟုတ် downloader က အလုပ်မလုပ်တာလား
Permalink Moe သည် ဒီဇင်ဘာ 6, 2011 9:23pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ downloader ကအလုပ်မလုပ်တာ အနီရေ ဘယ်လိုမှယူလို့မရဘူး
Permalink Moe သည် ဒီဇင်ဘာ 6, 2011 9:30pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ အဆောင်ဘုရားခန်းမှာပူဇော်ဖို့အတွက်ပါ ဒါကတော့အဆောင်ဘုရားစင်လေးပေါ့ တောသူမလေးကပူဇော်ဖို့တင်ပေးထားတဲ့ မြတ်စွယ်တော်ပါတပါတည်းပင့်လာခဲ့တယ်နော် အနီရေ လိုအပ်တာရှိရင်ပြောပေးပါနော်
Permalink နီစံ (အနီ) သည် ဒီဇင်ဘာ 25, 2011 7:11amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ မမမိုးရေ ကျေးဇူးပဲနော် လိုအပ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေ မို့ ယူသွားတယ်
1. ဗုဒ္ဓဟောကြားသော မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း အကဲဖြတ်နည်း။
2. ကောင်းကံက လွှမ်း။
3. ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်း။
6. တရားအားထုတ်ပြီး အနန္တော အနန္တငါးပါးကို ပူဇော်ကန်တော့ရန်။
7. အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ၏ လှူတတ်ဖို့လိုတယ်။
8. ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် ၁၂ ပါး။
9. တရားရလွယ် လိုက်နာဖွယ်။
10. ဆရာသမားကောင်း ရွေးချယ်နည်း။
11. မပေါင်းသင်းအပ်တဲ့ မိတ်ဆွေတု။
12. တရားအားထုတ်မည့်သူ၌ ရှိရမည့် အပရိဟာနိယတရား ၇ ပါး။
13. နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာ့ပြည်မှ မြေအမျိုးအစား။
14. အရှင်ဆေကိန္ဒ၏ ရှေ့တင်တစ်မျိုး၊ ကွယ်ရာတစ်မျိုးတရားတော်။
16. ၀မ်းကြာတိုက်ထဲကပင် သရဏဂုံဆောက်တည်ခဲ့သူ။
17. ဗုဒ္ဓဟောကြားသော မိတ်ဆွေကောင်းများ။
18. “ သူယုတ်မာအင်္ဂါလေးပါး ”
19. ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ ဟောကြားသော နတ်တွေပြောကြတဲ့ သူတော်ကောင်း။
20. ဓမ္မနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “၀ိဝါဒ” မဖြစ်ပွားရလေအောင်။